नेपालमा जारी १३ हौं सागको आज नवौं दिन १३ खेल हुँदैः कहाँ कहाँ हुँदैछन् हेर्नुहोस् ! ( नाम सहित) | suryakhabar.com
Home खेलकुद नेपालमा जारी १३ हौं सागको आज नवौं दिन १३ खेल हुँदैः कहाँ कहाँ हुँदैछन् हेर्नुहोस् ! ( नाम सहित)
on: २३ मंसिर २०७६, सोमबार ०६:१९ In: खेलकुदTags: No Comments
काठमाडौं । नेपालमा जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को नवौं दिन आज (सोमबार) विभिन्न १३ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । सागको नवौं दिन काठमाडौं पोखरा र जनकपुरमा गरि कुल १३ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
सागमा आइतबार आर्चरी, बास्केटबल, बक्सिङ, क्रिकेट, फेन्सीङ, फुटबल, जुडो, पौडी, सुटिङ,स्क्वास, टेनिस र कुस्तीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा महिला फुटबल र आर्चरी पोखरामा हुनेछ । कुस्ती जनकपुर र अन्य खेल काठमाडौंमा हुनेछ ।
पदक तालिकामा आठौं दिनसम्म भारतले १४५ स्वर्णसहित अग्रता बनाएको छ । ४५ स्वर्णसहित नेपालले भारतलाई पछ्याईरहेको छ ।
फुटबलः साग अन्तर्गत महिला फुटबलको फाइनल खेल सोमबार हुनेछ । पोखरा रंगशालामा हुने फाइनलमा नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । महिला फुटबलमा माल्दिभ्सले कास्य जितिसकेको छ । पुरुषको फाइनल भने मंगलबार हुनेछ । जसमा नेपाल र भुटान खेल्नेछन् ।
क्रिकेटः साग क्रिकेट अन्तर्गत पुरुषतर्फको फाइनल खेल आज (सोमबार हुनेछ) । स्वर्णका लागि श्रीलंका र बंगलादेशले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । यस्तै नेपाल र माल्दिभ्सले कास्य पदकको लागि खेल्नेछ । महिलातर्फको स्वर्ण बंगलादेश, श्रीलंकाले रजत र नेपालले कास्य जितेको छ ।
कबड्डीः हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कभर्डहलमा आज (सोमबार) महिला र पुरुष दुवैको फाइनल खेल हुनेछ । पुरुषतर्फ भारतले श्रीलंकासँग खेल्नेछ । महिलामा नेपाल र भारतबीच खेल हुनेछ । महिलाको फाइनल खेल १ बजे हुनेछ ।
बास्केटबलः बास्केटबल अन्तर्गत आज (सोमबार) सेमिफाइनल खेल हुनेछ । पुरुषको सेमिफाइनलमा बंगलादेश र श्रीलंका तथा भारत र नेपालबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
पुरुष सेमिफाइनलमा भारतले बंगलादेश तथा श्रीलंकाले नेपालसँग खेल्नेछ । महिलामा भारत र श्रीलंका उपाधिका लागि भिड्ने छन् ।
­­­­­­बक्सिङः साग बक्सिङमा आज (सोमबार) विभिन्न स्पर्धाको फाइनल हुनेछ । आज (सोमबार) बक्सिङमा ८ स्पर्धाको फाइनल खेल हुनेछ । नेपालका कुल ९ खेलाडी फाइनल पुगेका छन् ।
आर्चरीः आर्चरीमा आज (सोमबार) एकल महिला तथा पुरुषको रिकर्भ र कम्पाउण्ड गरी ४ वटा स्वर्ण पदकको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आर्चरी पोखरामा भईरहेको छ ।
स्क्वासः आज (सोमबार) स्क्वासमा पुरुष र महिलाको टिमको स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
टेनिसः टेनिस अन्तर्गत आज (सोमबार) महिला र पुरुषतर्फको सिंगल्सका खेलहरु हुनेछन् । टेनिस अन्तर्गत पुरुष सिंगल्सको उपाधिका लागि भारतका सकेथ साई मिनेनी र मनिष सुरेश कुमार तथा महिला सिंगल्सको उपाधिका लागि भारतकै श्रब्याभाबि सेट्टी र सत्विका समा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
कुस्तीः कुस्तीमा आज (सोमबार) दुई स्वर्ण पदकका लागि खेल हुनेछ । आइतबारसम्म भारतले १२, पाकिस्तानले तीन, श्रीलंकाले दुई र नेपालले एक स्वर्ण पदक जितेका छन् ।
जुडोः साग अन्तर्गत जुडोमा आज (सोमबार) विभिन्न तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा ७ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । खेल आर्मी शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्र, लगनखेलमा हुनेछ ।
फेन्सिङः फेन्सिङ अन्तर्गत आज (सोमबार) टिम स्पर्धामै तीन स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
पौडीः पौडी अन्तर्गत आज (सोमबार) विभिन्न स्पर्धामा खेल हुनेछ । सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरीमा बिहान हिट र बेलुका फाइनल चरणका खेल हुनेछ । सुटिङः सुटिङ अन्तर्गत सोमबार पनि एक खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
नेटो गठनको ७० औँ बर्षगाँठ मनाउन डेनमार्कमा आयोजित भेला रोकियो
२३ मंसिर २०७६, सोमबार ०६:१९